क्षणभरमै खुसी लुटीएको अस्ट्रेलिया कार दुर्घटना अघिको लाइभ भिडियो बाहिरीयो, हेर्नुहोस्
तीन वटा कारमा १५ जनाको समुह विदा मनाउन हिडेका थिए । तीन मध्य एउटा कार दुर्घटनामा परेको हो । अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरा नजिकै शनिबार राति दुर्घटना भएको हो
अस्ट्रेलियामा उनीहरु विदा मनाउन हिडेका थिए । एउटा कारमा पाँच जना बसेका थिए । बिदा मनाउन अष्ट्रेलिय स्थित स्नोई माउण्टेन हिडेका उनीहरुलाई के थाहा एक छिनमा सोच्नै नसकेको घटना हुनेछ । कारमा बसेका उनीहरु अन्ताक्षिरी खेल्दै हिडेका थिए । कारमा रहेकी युवतीले भिडियो खिचेकी छन् । फेसवुक लाइभमा उनीहरु निकै मस्ती मुडमा देखिन्छन् । आज बेस क्याम्प जाँदैछौ भोली हामी त्यहाँवाट माउन्टेन जान्छौं उनीहरुले कारमा जानकारी दिएका छन् । तर केही बेरमै सो कार दुर्घ८टना हुँदा स्याङजाका २ जना विद्यार्थीको मृ*त्यु भएको छ। अन्य ३ जना घाइते भएका छन्।
अस्ट्रेलियाको पर्यटकीय क्षेत्र स्नोई माउण्टेनमा हिउँ खेल्न जाने क्रममा उनीहरुले चलाएको कार मोनारो हाइवेमा दुर्घटनामा परेको थियो। उनीहरु त्यस तर्फ जाँदै गर्दा कार भित्र खिचिएको भिडियो सार्वजनिक
तीन वटा कारमा १५ जनाको समुह विदा मनाउन हिडेका थिए । तीन मध्य एउटा कार दुर्घटनामा परेको हो । अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरा नजिकै शनिबार राति दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी वालिङ नगरपालिका १० का समिक्षा सुवेदी र गल्याङ नगरपालिका ६ का गोपाल भण्डारीको ज्यान गएको हो।
अस्ट्रेलियाको पर्यटकीय क्षेत्र स्नोई माउण्टेनमा हिउँ खेल्न जाने क्रममा उनीहरुले चलाएको कार मोनारो हाइवेमा दुर्घटनामा परेको थियो। उनीहरु त्यस तर्फ जाँदै गर्दा कार भित्र खिचिएको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । कारमा पाँच जना छन् । जसमा उनीहरु निकै खुसी मुडमा देखिन्छन् । कारमा रहेकी युवतीले भिडियो लिएकी छन् भने अन्य साथीहरु पनि निकै खुसी देखिएका छन् । अन्य दुई वटा कारमा रहेका १० जना खाना खाएर क्यानबेरामै बसेका थिए। तर, ५ जना भने राति नै स्नोई माउण्टेनतिर रमाइलो गर्न हिँडेका थिए ।
क्यानबेराबाट करिब २ घण्टा लाग्ने सो स्थानमा चाँडै पुग्ने उद्देश्यका साथ उनीहरु राति नै हिँडेको घाइते आश्विन कडेलले बताएका छन् । आफू निदाएकाले तत्कालै केही थाहा नपाएको उनको भनाई छ। दुर्घट८नामा सख्त घाइते २ लाई हेलिकप्टरमार्फत लगेर उपचार भइरहेको र एकको भने स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। उनीहरुको अवस्था खतरामुक्त रहेको छ। मृ८तक दुवैजना डेढ वर्षअघि अष्ट्रेलिया गएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति July 30, 2019
रिस साँधेर बस्नु भनेको आगो समातेर बस्नु जस्तै हो
यी ६ कुराहरु महिला आफ्ना श्रीमानसँग लुकाउँछन्
जाडोमा यी खानेकुराले बनाउँछ प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो
अनुसन्धान भन्छः जेठो सन्तान जस्तो बोद्धिक अरु हुँदैनन् !
जोडी मिलाउने र निःसन्तानलाई सन्तान दिने विश्वास गरिने दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर
गौतम बुद्धका उपदेश पालना गरे दुःखहरू सबै शान्त हुने
जाडोमा किन खाइन्छ बदाम ? यस्ता छन् ७ फाइदा
बिश्वाश गर्नुहाेस्, यी राशिका पुरुषले दिदैनन् कहिले पनि धोका
गण्डकी प्रदेशले फेवातालमा कफी सप खोल्ने: एक कप कफिको मुल्य सुन्दा उड्छ होस्
मागेरै धुमधामसँग अन्तरजातीय बिहे
आमाको किरिया गर्दै दुई बालिकाः पण्डितलाई मनाउन हम्मे, खर्चको अभाव
पुजाको ५ बर्से छोरा: जसलाई ६ महिनाको हुँदा बाबू आमाले छाडे (भिडियोसहित)
टेलिकमको अफरः ‘ठण्डा रातमा तातो कोठाभित्र’ १२ रुपैयाँमा रातभर कल
‘प्रधानमन्त्रीलाई मेरै मिर्गौलाले काम गरिरहोस्’
स्वास्थ्यबारे प्रधानमन्त्रीः ५ पटक मृगौला फेरेका मान्छे काम गरिराखेका छन्, मलाई १५/२० वर्ष समस्या हुँदैन
भारत, चिन र अमेरिकालाई पछि पार्दै नेपालले राख्यो नयाँ रेकर्ड !